cele – Page 20 – CELE WINGAGAR
ငယ်စဉ်ကတည်း က အခြွေအ ရံတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးလေး ငယ်သူငယ်ချင်းအူဝဲတယောက် အကျဉ်းကျနေတာကို တွေးမိတိုင်းနာကျင်ခံစားနေတဲ့ မေဦးမောင်
August 19, 2021 100million 0
ငယ်စဉ်ကတည်းက အခြွေအရံတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာတဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးလေး ငယ်သူငယ်ချင်းအူဝဲတယောက် အကျဉ်းကျနေတာကို တွေးမိတိုင်းနာကျင်ခံစားနေတဲ့ မေဦးမောင် ပြည်သူတွေနဲ့အတူ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးခဲ့ကြသူများထဲတွင် သရုပ်ဆောင် အိန္ဒြာကျော်ဇင်လည်း တစ်ယောက်အပါအဝင်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓမ္မဘက်ကနေ ရပ်တည်ပေးခဲ့တဲ့သူမကို အာဏာရှင်လူတစ်စုမှ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် တရားစွဲဆိုအရေးယူခဲ့ပြီး မကြာခင်မှာပဲ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရတာ […]
ပရိတ်သတ်တွေ မနှစ်သက်တဲ့ အရာတစ်ခုကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြောင်း အသိပေးလာတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ
August 17, 2021 100million 0
ချစ်ခင်အားပေတဲ့သူတွေ ဝန်းရံတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ မနှစ်သက်တဲ့ အရာတစ်ခုကို စွန့်လွှတ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြောင်း အသိပေးလာတဲ့ ကျော်ကျော်နန္ဒ ကျော်ကျော်နန္ဒကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ေ ပ်ါနေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့တာကြော င့် ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့်အရေးယူထားခံခဲ့ရပေမယ့်လ ည်း မကြာသေးခင်လပိုင်းလောက်က ပြစ်မှုကနေ ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးခြင်း ခံခဲ့ရတာ […]
သားအဖသုံးယောက် အတူတူ ကခဲ့တဲ့ Tik Tok Video လေး ကိုပြန်ကြ ည့်ပြီး ဖြေမဆည်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ မေတ္တာမြင့်မြတ်ဟိန်း ( ဗီဒီယိုဖိုင် )….
အာဏာသိမ်းမူ မတိုင်ခင် သားအဖသုံးယောက် အတူတူကခဲ့တဲ့ Tik Tok Video လေးကိုပြန်ကြည့်ပြီး ဖြေမဆည်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့ မေတ္တာမြင့်မြတ်ဟိန်း ( ဗီဒီယိုဖိုင် ) ပြီးခဲ့တဲ့သြဂုတ်လ (၂) ရက်နေ့မှာ ဘဝတစ်ပါးကိုပြော င်းရွှေ့သွားတဲ့ လူရွှင်တော်ဦးမေတ္တာဟာ မိသား စုအတွက်အားကိုးရတဲ့ဖခင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့သလို သားသမီးတွေအတွက်လည်း အဖေလိုတစ်မျိုး […]
မိမိမှာ တပ်မတော်ထောက်ခံသူဖြ စ်သော်လည်းရဲတွေရဲ့ ရှာဖွေခြင်းကို ခံနေရပြီဖြစ်တာမို့ ဆဲဆိုပြီး အမှန်ကို ဖြေရှင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ယုန်လေး….
မိမိမှာ တပ်မတော်ထောက်ခံသူဖြစ်သော်လည်း ရဲတွေရဲ့ ရှာဖွေခြင်းကိုခံနေရပြီဖြစ်တာမို့ ဆဲဆိုပြီး အမှန်ကို ဖြေရှင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ယုန်လေး ပရိတ်သတ်ကြီးရေ.. အဆိုတော်ယုန်လးဟာ ဆိုရင် တေး သီချင်းများစွာကို သီဆိုခဲ့တဲ့အဆိုတော်တစ်ဦးပဲဖြ စ်ပါတယ်။ ယုန်လေးကတော့ ဘယ်နေရာကိုမှ ဖြစ်ြ ဖစ်မြောက်မြောက်ဖြစ်အောင် လုပ်နိုင်လေ့ မရှိဘဲ အဆဲခံရအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းတစ်ခုကိုတော့ ပို င်နိုင်လှသူဖြစ်ပါတယ်။ […]
ခက်ခဲနေတဲ့ အိမ်ခြေ (၂၀၀)စာအတွက် ဟင်းချက်စရာအသားနဲ့ အသီးအရွက်တွေထပ်မံလှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချော ခိုင်နှင်းဝေ
စားဝန်နေရင်းခက်ခဲနေတဲ့ အိမ်ခြေ (၂၀၀)စာအတွက် ဟင်းချက်စရာအသားနဲ့ အသီးအရွက်တွေထပ်မံလှူဒါန်းပေးလိုက်တဲ့ မင်းသမီးချော ခိုင်နှင်းဝေ ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့အချစ်တော် ပရဟိတ မင်းသမီး ခိုင်နှင်းဝေကတော့ ဒီနေ့မှာလည်း အြေ ခခံမိသားစုတွေ စားသောက်ရေးအဆင်ပြေစေဖို့အ တွက် ဟင်းချက်စရာတွေလှူဒါန်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ခိုင်နှ င်းဝေကတော့ ပြည်သူတွေဘာလိုအပ်နေလဲဆိုတာကို အချိန်တိုင်းကြည့်နေသလား ထင်မှတ်ရလောက်အောင်ကို […]
ချစ်တဲ့ ချီလီတွေပေးတဲ့ Branded လက်ဆောင်တွေနဲ့ သူမ ဘဝ မှာ သာယာပျော်ရွှင်နေရကြောင်းကို IG မှာတင်ပြီး ပြသလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး
ချစ်တဲ့ ချီလီတွေပေးတဲ့ Branded လက်ဆောင်တွေနဲ့ သူမဘဝမှာ သာယာပျော်ရွှင်နေရကြောင်းကို IG မှာတင်ပြီး ပြသလိုက်တဲ့ နေခြည်ဦး သရုပ်ဆောင်နေခြည်ဦးကတော့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာထက်မှာအလြှ ပင်ပြခဲ့ပြီးတော့ဈေးကြီးတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကြွား ခဲ့ရင်းပရိတ်သတ်တွေစတင်သတိထားမိလာပြီးစကားပြောအလွန်လည်တာေ ကြာင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့မင်းသမီးချောတ စ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နေခြည်ဦးကဖခင်ကြီးရဲ့အရှိန်အဝါကြောင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်သရုပ်ဆောင်မှုပိုင်းတွေမှာသုမပိုပြီးကြိုးစားနေရဆဲ ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။နေခြည်ဦးကတော်လှန်ရေးကြီးမှာလဲ အပေါ်ယံသာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ဝေဖန်မှု ကိုလဲခံခဲ့ရသေးပါတယ်၊နောက်ပိုင်းမှာတော့ငိုပြပြီးသူမ ကိုချစ်သေးတဲ့ပရိတ်သတ်များရှိကြောင်းကိုလဲပြောကြားလာခဲ့ပါတယ်။ အခုတစ်ခါမှာဆိုရင်လဲသရုပ်ဆောင်နေခြည်ဦးကသူမကိုချစ်တဲ့ပရိတ် […]
လာရောက်ဆဲဆိုနေ တဲ့သူတွေကို တခမ်းတနားစာ တတန် ပေတတန်ရေးကာ ဂရုဏာသက်မိကြောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ရွှေရူပါဦး..
August 15, 2021 100million 0
သူမကို လာရောက်ဆဲဆိုနေတဲ့သူတွေကို တခမ်းတနားစာတတန် ပေတတန်ရေးကာ ဂရုဏာသက်မိကြောင်းဆိုလိုက်တဲ့ ရွှေရူပါဦး.. စိတ်အထွေထွေရှိတဲ့ လူအမျိုးမျိုးကို ခွင့်လွှတ်နားလည်ေ ပးနိုင်ရင်မိမိစိတ် ငြိမ်းချမ်းမှုအစစ်ကို ရရှိတာပါပဲ ဘဝမှာဘာခံစားချက်မှ အရေးမပါ/အသုံးမကျလို့ ဘာလာလာသိပ်မခံ စားတတ်သလို ခံစားမှုရှိလာခဲ့လည်း မမြဲဘူးဆိုတာကိုသဘောပေါက်လို့ပါပဲ သူကသူ/ ကိုယ်ကကိုယ် ဖြစ်လို့သူများ အကုသိုလ်/ကုသိုလ်ဟာ ကို […]
အရွယ်လေးနဲ့မလိုက်အောင်လည်နေတဲ့ သားလေးအာကြီးကိုကြည့်ပြီး ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ
August 14, 2021 100million 0
ပရိသတ်ကြီးရေ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော်ဖြစ်တဲ့ မင်းသမီးကြီး ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ဂေဟာမှာခေါ် ယူမွေးစားထားတဲ့ကလေးတွေထဲက အာကြီးဆိုတဲ့ ကလေးလေးကိုတော့ ပရိသတ်တွေရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်။အာကြီးကတော့ ခိုင်နှင်းဝေရဲ့ ဂေဟာကိုရောက် ရှိလာကတည်းက သူ့ရဲ့ဘဝအေ ကြာင်းတွေကြောင့် ခိုင်နှင်းဝေရော ပရိသတ်တွေကပါ သနားချစ်နဲ့ အချစ်ပိုနေရတဲ့ကေ လးလေးဆိုရ င်လည်းမမှားပါဘူး။ လတ်တလောမှာတော့ ခိုင်နှင်းဝေက အားကြီးအတွက် […]